၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တက္ကသိုလ်၀င်တန်းစာမေးပွဲ ထူးချွန်ကျောင်းသား ဆုပေးပွဲ။ - Success Private High School
09 788 022 659
Success Private High School
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တက္ကသိုလ်၀င်တန်းစာမေးပွဲ ထူးချွန်ကျောင်းသား ဆုပေးပွဲ။
November 22, 2019 December 27, 2019 Success
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တက္ကသိုလ်၀င်တန်းစာမေးပွဲတွင်ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြသော ဂုဏ်ထူးရှင်များ ၊ တိုင်းအဆင့်နှင့်အတန်းလိုက် ထူးချွန်ဆုရရှိကြသော ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများအား ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို ၂၁-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် Gandamar Wholesale Center ( Gandamar Ballroom ) ၌စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် Success ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတည်ထောင်သူ ဆရာဦးလှဘုန်းဦးမှ တက္ကသိုလ်၀င်တန်းစာမေးပွဲတွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သောဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးရှင် မောင်ဇံလင်းထက် ( Success တောင်ဥက္ကလာ )အားလည်းကောင်း ၊ ဆရာဦးတင်မောင်ဦးမှဆုရရှိသူ ကျောင်းသူတစ်‌ယောက်အားလည်းကောင်း ဆုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါသည်။
Success ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း တည်ထောင်သူ ဆရာကြီးများ ၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးများ ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ကြားမူဆရာ ဆရာမများ ၊ ထူးချွန်ဆုရကျောင်းသားကျောင်းသူများ ၊ ကျောင်းသား မိဘများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်များ စုံလင်စွာ တတ်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ICT Development Computer Class
၂၀၁၉-ခုနှစ် Success ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲ
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အနုပညာ အသင်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ဘင်ခရာ အသင်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းစာကြည့်တိုက် အသင်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းကျန်းမာရေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် သိပ္ပံ အသင်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အားကစားနှင့် ကာယ အသင်း
၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ဇွန်လ-၅-ရက် ကမ္ဘာ့သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း။
၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် မေတ္တာအခါတော်နေ့ အခမ်းအနား
၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖြတ်ရေး
၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ကလေးစာပေပွဲတော်
(၉၉) နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ်
(၇၂) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်
Kahtina Robe Offering Ceremony (ကထိန်သင်္ကန်း ကပ်လှူ ပူဇော်ပွဲ) (16th November, 2018)
Prize Giving Ceremony to Outstanding Students in 2017-18 Matriculation Examination
၁၇ ရက်နေ့ ဩဂုတ်လ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သော ဝါဆို သင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား။
(South Okkala Branch)
No. 934, Thitsar Road, 7th Block, South Okkalapa Tsp., Yangon, Myanmar.
Ph. +959 788022659, +959 420886680
SuccessThe Great Private High School
(North Dagon Branch)
No. 18, Pinlon Road, 29th Block, Dagon Myothit(North) Tsp., Yangon, Myanmar.
Ph : +959 780575347, +959 442628741
Design By by MTG